गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ – Mission
काठमाडौं । हामी सानै हुँदा अनि देखि त्यस्ता धेरै धेरै भनाइ वा उखान सुन्दै आएका हुन्छौं। कतिले हामीलाई बिस्वासमा पार्छन् भने कति बेकारका लाग्छन्।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक ९, २०७४ 5:38:15 PM |
Prevचुनाव भाँड्न सर्वोच्च अदालत सहयोगी बनेको एमालेको ठहर
Nextओली र प्रचण्डको एउटै बोलीः कुनै पनि निहुँमा चुनाव सार्न मिल्दैन